Wefdi Jubbaland ka socoda oo Mareykanka ku sugan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wefdi Jubbaland ka socoda oo Mareykanka ku sugan
Wefdi Jubbaland ka socoda oo Mareykanka ku sugan
Minnesota(SONNA) Wefdi Ballaaran oo ka socday Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gaaray magaalada Minneapolis ee Gobolka Menisota ee dalka Maraykanka,waxaana wafdigani soo dhaweeyey jaaliyadda Soomaalida ee hlkaasi kunool.
Ujeedada socdaalka wefdigan oo ka socoda Golayaasha kaladuwan ee Dowlada Goboleedka Jubbaland ayaa ah sidii ay kulamo wadataashi ah ula yeelan lahaayeen Jaaliyadda Soomaaliyeed,gaar ahaan tan Jubbaland,iyagoo kala hadli doona sidii looga qeyb qaadan lahaa horumarinta deegaanada uu maamulka uu kataliyo.
C/wahaab Maxamed Daahir oo ah wakiilka Jubbaland ee Waqooyiga Mareykanka ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in wefdigan inta uu joogo ay kulamo kaladuwan la yeelana doonaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee kunool halkaasi,iyagoo kala hadlaya dowrka qofkasta uu ka qaadan karo horumarka dhulkiisa Hooyo.
Xubnaha wefdigan ka socoda Jubbaland ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona Mareykanka,si bulshada Soomaaliyeed ay u gaarsiyaan farimaha ay u sidaan,waxayna uga warbixindoonaan xaaladda Dalka gaar, ahaan deegaanada Jubbaland oo ay wakiilka ka yihiin.
Previous articleFaah faahin ku saabsan dagaal ka dhacay Hiiraan
Next articleWar-murtiyeedka Shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee DF & D/Goboleedyada+Sawirro